Maxaa ku kalifay ninkan inuu gacantiisa lugta isaga jaro? - BBC News Somali
Image caption Mindida jeebka lagu qaato
Nin beeraley ah oo u dhashay gobolka Nebraska ee waddanka Mareykanka ayaa lugtiisa waxa uu isaga jaray midi yar oo nooca jeebka lagu qaata ah kaddib ay lugtu qabsatay qalab beerta uu ku falanayay.
Kurtis Kaser, waa nin beeraley ah oo 63 jir ah, wuxuuna sharraxaad ka bixinayaa arrintii ku kalliftay inuu lugta iska gooyo isagoo kaligiis ah oo gacantiisa adeegsanaya.
Kaser ayaa sheegay in lugta ay uga xannibantay bir mashiin ah gudaheed, xilli uu ku guda jiray howl maalmeedkiisa caadiga ah.
"Mashiinku wuu wareeganayay anigana waxaan ogaa inay jirtay meel dalool ah oo aan sameeyay, lugtii ayaa halkaas ii dhex gashay, weyna igu adkaatay inaan kasoo bixiyo. Inbadan ayaan isku dayay inaan kasoo baxsado laakiin iima suurta galin", ayuu yidhi.
Intaas kadib wuxuu mashiinkii u jiitay ilaa 60 mitir oo dhanka gurigiisa ah, isagoo markaas doonaya inuu la tago taleefanka agtiisa, si uu u waco lambarka booliska ee 9-1-1.
Laakiin isku dayadiisii oo dhan uma suurta galin, wuxuuna dareemayay xanuun aad u badan oo ay birta qabatay ku heysay.
Image caption Kurt Kaser
Sidoo kale uma uusan dhaweyn taleefankiisa gacanta, mana uusan heli karin wax caawinaad ah.
Ugu dambeyn wuxuu lasoo baxay mindi yar oo jeebka ugu jirtay wuxuuna billaabay inuu lugtiisa iska gooyo.
Goor dambe waxaa loola cararay isbitaalka oo lagu geeyay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah, si gargaarka ugu dhakhsiyaha badan loogu sameeyo.
"Waddo kale oo ii furneyd ma aanay jirin," ayuu Mr Kaser ku yidhi wareysi uu siiyay warbaahinta ABC News.
Ninkan beeraleyda ah ayaa isbitaalka ku jiray muddo todobaadya ah halkaas oo lagu baxnaaniyay ka hor inta uusan Jimcihii tegin gurigiisa oo ku yaal deegaanka Pender oo u dhaw xadka gobolka Nebraska uu la leeyahay gobolka Iowa.
Hadda oo uu guriga dib ugu soo laabtay, wuxuu u tababaranayaa inuu hal lug ku shaqeeyo, isagoo rajeynaya inuu shaqadiisa mar kale ku laabto.
Image caption Qalabkan ayaa waxaa loo sameeyay sida musmaar weyn oo kale kaas oo girgiro ku leh dhinacyada
Ninkan beeraleyda ah ayaa waxa uu kaligii ka shaqeynayay beertiisa oo 607 oo hektar ah markaas oo uu shilku qabsaday 19-kii Abriil.
Waxaa u suurageli waysay inuu taleefankiisa gacanta ku soo dhigo si uu caawinaad u dalbado, Mr Kaser ayaa daawanayay markii makiinadda ay cagtiisa jarjartay oo misana ay soo burburisay dhudhunkiisa xilli ay makiinaddu ku soo socotay dhina sare ee lugta.
Ninkan beeraleyda ah ayaa kaddib waxa uu la soo baxay midi yar oo jeebka ugu jirtay waxa uuna iska jaray inta ka hoosaysa jilibka.
"Lafta ayaa bannaanka u soo baxday ilaa meel ku dhaw jilibka," waxa uu sheegay warbaahinta Omaha World-Herald. "Arrintaas ayaa I haysatay markii aan iskudayay inaan nafteyda meesha kala baxo."
Markii uu makiinaddii ka soo baxsaday ayuu Mr Kaser waxa uu soo guurguurtay boqolaal mitir si uu ugu yimaado taleefankii ugu dhawaa markaas oo uu wacay wiilkiisa kaas oo meeshii ka soo qaaday oo magaalada geeyay. Kaddib waxaa loo soo duuliyay caasimadda gobolka ee Lincoln si halkaas loogu dabiibo.
Mr Kaser ayaa sheegay inuu iska bixiyay qalab loogu talagalay in lagu ilaaliyo badqabka jirka dhammaadka xilligii qaboobaha si qalabka ay ugu fududaato inuu gudaha u galo dhulka, waxa uuna warbaahinta ABC News uu u sheegay in "nafteyda ayaan niyadjabiyay sababtoo ah ma aanan ka fakarin inaan qalabka hagaajiyo".
"Hasayeeshee waa sababta shil loo yiraahdo ayey ila tahay."
"Waxaa laga yaabaa inay sidan kasii darnaan lahayd, waana ogahay inay jiraan dad aniga iga sii daran", ayuu yidhi Kaser.